किन भयो नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर हट-केक ? अब कति पुग्छ ? – Investing Nepal
किन भयो नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर हट-केक ? अब कति पुग्छ ?
By: Nepse Direct May 20, 2021
नेशनल लाइफ इन्सुरेन्सको कम्पनीको शेयर दुईदिनमा एकै एकचोटि हटकेक बन्न गएको छ । अघिल्लो साता ११०० को आसपासमा किनबेच भइरहेको यो कम्पनीको शेयरमूल्य विगत दुई दिनमै तेह्रसय आसपासमा उक्लिएको छ ।
एकातिर नेप्से परिसुचक ऐतिहासिक रुपमा नै नँया उचाई चुमुरहेको छ भने, अर्का तिर नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार रकममा भएको ऐतिहासिक ठुलो कारोबार भईरहेको छ । सेयरबजारका सबै स्टेकहोल्डर हैसिरहेको यो अवस्थामा नेशनल लाइफ इन्सुरेन्सको कारोबार लोभलाग्दो देखिएको छ । बुधबार मात्रै ४५ करोड भन्दा बढि कारोबार भईरहेको यो कम्पनीको सेयरलाई संगठित रुपमै ९ वटा ब्रोकर कम्पनीहरु उठाउन लागिरहेका छन किन कि मंगलबार र बुधबारको कारोबार लाई हेर्ने हो भने ब्रोकर नं ५८, ब्रोकर नं ४९, ब्रोकर नं ४२, ब्रोकर नं ४५, ब्रोकर नं ४३, ब्रोकर नं २६, ब्रोकर नं २२, ब्रोकर नं ११, ब्रोकर नं २१ ले सबैभन्दा बढि खरिद गरेको कम्पनी नै नेशनल लाइफ इन्सुरेन्सको कम्पनी अर्थात एनएलआईसिएल भएको छ । यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि यो कम्पनीको सेयर मूल्यमा ठुलो बृद्धि हुने निश्चिित छ ।
किन बढ्यो ? अन्डर भ्याल्युड भएरै हो त ?
बजारमा समग्र लाईफ ईन्सुरेन्सको बजारलाई हेर्दा अब्बल कम्पनी भए पनि यो कम्पनीको सेयर मूल्य अन्डर भ्यालुड थियो । एसियन लाईफ ईन्सुरेन्स भन्दा हरेक आधारभुत पक्षलाई अबल हुँदा पनि नेशनल लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य किन कम थियो भनेर धेरै जुझारु लगानीकर्ताहरुको आँखा यो सेयर प्रति रहिनै रहेको थियो ।
ईन्साईडर सुचना के छ ?
यो कम्पनीको एनएलजि मा ५० प्रतिशत सेयर छ, जसलाई बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय ले क्रसहोल्डिङ्ग गर्न नपाउने भने पछि उक्त सेयर नेशनल लाइफ इन्सुरेन्सले बेच्नु पर्ने बाध्यता छ । यो खरिद गरेको सेयरको रकम सोझै रिजर्भमा जाने भएको कारण नेशनल लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य ३००० माथि जान्छ भनेर ब्रोकरहरु नै बताउन थालेका छन् । बिमा समिति अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालको कठोर निर्देशनका कारण अब क्रसहोल्डिङ्ग भएका अन्य बिमा कम्पनीहरुलाई पनि आफ्नो लगानी बेच्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै गरि अघिल्लो आर्थिक बर्ष ५१ प्रतिशत लाभाशं घोषणा गरेको र विगतमा ५५ प्रतिशत सम्म बोनस दिएको यो कम्पनीले यसपाली बम्पर उपाहार दिन सक्ने धेरै लगानीकर्ताहरुले अनुमान गरेका छन् । साथै पुँजी बढाउने गरि हकप्रद सेयर निस्कान गर्न नँया बिमा कम्पनीलाई मात्र अंकुस लगाएको बिमा समितिले पुराना बिमा कम्पनीलाई अंकुस नलगाउने रणनिति लिएको छ ।
तत्काल हेर्दा बुधबारको मात्र कारोबार मूल्य नै ग्याप अप भई ओपन भएको हँदा तत्काल यो सेयर घट्ने सम्भावना छैन । माग उच्च भएको ठुला खेलाडिहरु रोकिदै यो सेयर उठाउन हौसिने छन् । बजार लगातार बढेको खण्डमा विभिन्न फण्डा गरेर यो कम्पनीको सेयर उठाउन लाग्न सक्नेछन । तत्कालको अवस्थामा अझै यसको मूल्यमा ब्रेक आउट भईसकेको छैन, प्राविधिक हिसाबमा हेर्नेहो भने यो कम्पनीको सेयर मूल्य १३५० को मूल्यमा ब्रेकआउट भएर बिग बुल ट्रेण्ड समात्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा, यो कम्पनीको सेयर मूल्य २००० माथि सहजै पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि कसैले २५०० माथि पुग्छ भनेर यो सेयर तँपाईलाई किन्न आदेश गर्छ भने तँपाई यो कम्पनीको सेयर मूल्य २००० को आसपासमा भएपछि चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ ।